आर्थिक मामिला तथा रोजगारमन्त्री, प्रदेश २
० प्रदेशसभाको बजेटमा बढी प्राथमिकतामा के–के छन् ?
— प्रदेश २ भनेको शतप्रतिशत कृषिमा आधारित प्रदेश हो । त्यसैले हामी कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन लगायतलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेका छौं ।
० कृषिको योजनाहरू के–के छन् ?
— बजेटमा हामीले कृषि र सिँंचाइलाई प्राथमिकता दिएका छौं । कृषि क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन यो एउटा सुरूवात मात्रै हो । यसभित्रका विषयवस्तु अहिले हामी सदनमा लगेका छैनौं, नीति तथा कार्यक्रम मात्रै हो ।
० प्रदेश २ को अर्थतन्त्रलाई उकास्न प्रदेश सरकारको योजना के छ ?
— नेपालमा शासन व्यवस्था सुरू भएदेखि नै ऊर्जा र विकासको नारा दिदै आएको हो । तर, प्रदेश २ मा ऊर्जाको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने जलविद्युतको सम्भावना छैन । बाँकी सबैथोक प्रदेश २ मा छन् । जल विद्युत नभएपनि कृषिलाई अगाडि बढाउने योजना बनाएका छौं । कमला–कोसी डाइभर्सनको हामी केन्द्रसँग माग गरेका छौं । कमला–कोसी डाइभर्सन बनायौं भने जल विद्युत पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यसबाट लगभग ६–७ जिल्लालाई पूर्णरूपेण संचित हुने हिसाबले केन्द्रसँग नीति तथा कार्यक्रममा माग गरेका छौं । यदि त्यसो भयो भने कृषिका लागि सिँंचाइको समस्या समाधान हुन्छ ।
० प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको सयदिने कार्ययोजना कति लागू भएको छ ?
— सयदिने कार्ययोजना र नीति तथा कार्यक्रममा केन्द्रित भएर हामीले अहिलेको बजेट विनियोजन गरेका छौं । प्रदेश २ को अवस्था हेर्दा सबभन्दा बढी पिछडिएको शिक्षा क्षेत्र हो । गरिबी त्यतिकै छ, बेरोजगारी त्यतिकै छ, यी सबैलाई समेटेर हामी अहिले बजेट विनियोजन गरेका छौं ।
० कार्ययोजना सय दिनमै लागू हुने सम्भावना कति छ ?
— जुन दिन हामीले सयदिने कार्ययोजना सार्वजनिक ग¥यौं त्यहीं दिनदेखि यसको कार्यान्यवन सुरू गरिसकेका छौं । जस्तै, बेटी पढाउ बेटी बचाउ, शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ लागिसकेका छौं । स्वच्छता अभियान पनि सुरू गरेका छौं । सय दिनभित्रै पूरा गर्ने त्यस्तो छैन । सुरूवात गर्ने र यसलाई एउटा नीतिकै रूपमा जाने योजना छ ।
० बेटी बचाउ बेटी पढाउ अभियान प्रभावकारी बनाउन कति चुनौती देख्नु भएको छ ?
— नेपालमा गर्नका लागि कुनै पनि कामलाई चुनौतीकै रूपमा लिएर गर्नुपर्छ । विगतमा पनि धेरै नीति तथा कार्यक्रम बनाइयो तर प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन । प्रदेश २ ले जुन नीति लिएको छ, त्यो नीतिको कार्यान्वयनसम्म पुग्ने लक्ष्य हो । प्रदेश २ को सरकारले त्यो अभियानलाई सुरूवात गर्ने र पूरा गर्न प्रतिबद्ध छ ।
० महिलामाथि हुने विभिन्न खाले हिंसालाई रोक्न के कस्ता नीति बनाउँदै हुनुहुन्छ ?
— महिलामाथि हुने हिंसाप्रति प्रदेश सरकार शून्य सहनशीलता अपनाइएको छ । कडा कानून बनाएर सरकारले कार्यान्वयन गर्ने नीति अपनाएका छौं ।
० दाइजो प्रथा उन्मूलनका विषयमा के छ नीति ?
— दाइजो प्रथा भनेको अशिक्षित समाजमा हुन्छ । हाम्रो प्रथम लक्ष्य नै हो बेटी बचाउ बेटी पढाउ हो । महिला शिक्षित भएपछि समाजमा दाइजो प्रथाको अन्त्य हुन्छ, त्यो विश्वास सरकारले लिएको छ ।
० तर, सबभन्दा बढी दाइजो लिने दिने बढी शिक्षित परिवारमा नै हुने गरेको पाइएको छ ?
— हामीले सबभन्दा पहिला यो दाइजो प्रथाप्रति जुन किसिमको मानसिकता छ त्यसलाई अशिक्षाको नमूना भनेका छौं । छोरीप्रति समाजमा जुन किसिमको मानसिकता छ त्यसलाई निर्मूल पार्ने हाम्रो सोच छ ।
० समाजमा जडा गाडिसकेको दाइजोबाट प्रदेश २ मुक्त हुन सक्छ ?
— एकदमै हुन्छ । यसका विरूद्धमा हामी कानून बनाउँदैछौं र त्योअनुसार हामी कार्यान्वयन गर्छौं । सबभन्दा पहिला त छोरीलाई शिक्षित बनाउनुपर्छ । छोरी शिक्षित भएपछि यसले घर, परिवार, समाज र देशमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्ने हिसावले अभियान चलाउँछौं । महिला हिंसालाई शून्यमा झार्ने हाम्रो लक्ष्य हो ।
० प्रदेश २ का जनताले संघीयता र सरकारको अनुभूति कति गर्न पाएका छन् ?
— प्रदेश २ का जनताले संघीयताको अनुभूति नगरेको भए संघीयता लागू नै हुने थिएन । नेपालमा संघीयताको स्थापना मधेशी समूदायकै कारणले नै भएको हो । त्यसैले संघीयतालाई संस्थागत गर्नका लागि प्रदेश २ का जनता एकदम सचेत भएका छन् । प्रदेश २ मा जुन किसिमले संघीयताको अभ्यास हुन्छ त्यसले नै नेपालमा संघीयताको भविष्यको निर्धारण गर्छ ।
० प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूसम्म कामभन्दा कुरा बढी गरेको भन्ने आरोप छ के भन्नुहुन्छ ?
— प्रदेश २ को तुलनामा अन्य कुन प्रदेशमा धेरै काम भएको छ ? कसैले गरेका छैनन् । हामीमाथि आरोप मात्रै लगाइरहेका छन् । संघीयतामाथि प्रहार गर्ने हिसावले एउटा डिजाइन मात्रै हो ।
० प्रदेश मन्त्रीहरू सामान्य उद्घाटन, सभा, समारोह लगायतमा बढी सहभागी भयो भन्ने आरोप पनि छ नि ?
— म पनि प्रदेश २ का एउटा मन्त्री हुँ । आजसम्म म कुनै कार्यक्रममा सहभागी भएको छैन । आवश्यक नपरेको ठाउँमा हामी भाषण गरेका छैनौं । जनतालाई काम परेको ठाउँमा सरकार नपुग्नु यो पनि नकारात्मक कुरा हो । हामी सामान्य कार्यक्रममा मात्रै सहभागी भएको भन्ने आरोप मात्रै हो । यो भनेको संघीयतामाथिको प्रहार हो ।
० प्रदेश २ मा अन्य दलबाट सरकराले कति सहयोग पाइरहेको छ ?
— प्रदेश २ मा वाम गठबन्धनले हामीलाई समर्थन गरेको छ र कांग्रेसले अहिलेसम्म समर्थन गरेको छैन । तर, हामीले प्रदेश २ को विकास र समृद्धिका लागि सबै दलसँग छलफल गर्दै आएका छौं ।
० प्रदेश २ को नाम, स्थायी राजधानी र कामकाजीको भाषाको कहिले टुंगो लाग्छ ?
— सरकारी कामकाजको भाषाको हकमा सबै भाषा राष्ट्रिय भाषा हो । संविधानले नै भनिसकेको छ । नाम र राजधानीको विषयमा छिट्टै सदनमा प्रस्ताव ल्याउँदैछौं । सर्वदलीय छलफलबाट निर्णय हुनेछ । प्रदेश २ को नाम सहमतिबाट राख्ने हो । खासगरी प्रदेश २ मधेशको केन्द्र भएकोले आन्दोलनको आधारमा नाम राखिनेछ ।
० तपाईंहरूले प्रदेश २ लाई मधेश प्रदेश स्वीकार गरिसक्नुभएको हो ?
— हाम्रो प्रथम मधेश आन्दोलनका बेलादेखि नै उठेका मुद्दाहरूमा प्राप्त भएका उपलब्धिको रक्षा गर्ने र बाँकी कुराका लागि संघर्षरत रहन्छौं । यो नीति नै हो हाम्रो । हाम्रो जुन लक्ष्य छ त्यो प्राप्त भएको छैन । प्रदेश २ को सरकारले पनि संघर्षको एउटा नीति बनाउँछ र त्यो अनुसार हामी अगाडि बढ्छौं ।
० भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण हुँदैछ र यसै क्रममा प्रदेश राजधानी जनकपुरधाम पनि जाने तय भएको छ । उहाँको स्वागतका लागि प्रदेश सरकार के गर्दैछ ?
— प्रदेश २ का जनता र यहाँका सरकार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुरधाममा हुने भ्रमणलाई लिएर एकदम उत्साहित छन् । उहाँको स्वागतका लागि यहाँका सरकार र जनता तयारी अवस्थामा छन् । प्रदेश २ मा एकदमै उत्साहजनक अवस्था छ । उहाँको भ्रमणको पूर्वतयारीका लागि नेपालका लागि भारतीय राजदूत मन्जीवसिंह पुरी पनि यहाँ आएर प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गरेर जानुभएको छ ।